baked beef | Colourful Recipes
Tag Archives: baked beef
Beef salad with lime juice
Add chilies, garlic, fresh ginger, lemon grass, coriander leaves, fish sauce and lime juice. Stir until mixed well.
Layeralarge piece of tin foil inabaking pan then place the beef fat side up on top of the foil.
Preheat oven 350ºF –2hours.
Coriander root chopped
အမဲသားကင် သံပုရာရည်ဆမ်း အသုပ်
အဆီပါသော အမဲသား – ၃ ပေါင်
သံလွင်ဆီ – ထမင်းစားဇွန်း – ၁ ဇွန်း
ဆား – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း – ၁ ဇွန်း
သကြား အညို – ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
ပျားရည် – ခွက် လေးပုံ ၁ ပုံ
oven foil အလူမီနီယံ အသားကင်တဲ့ baking pan ထဲမှာ အမဲသားတုံးကို အဆီပါတဲ့ ဘက်ခြမ်းကို အပေါ်ဘက်ခြမ်းမှာ ထားပီး အပေါ်မှ oven foil ဖြင့် သေချာ ထုတ်ပါ။ အမဲသားကင်နေတုန်း အမဲသားထဲက ထွက်လာသော အသားရည်၊ သကြားအရသာ၊ ပျားရည် အရသာတို့ဖြင့် အမဲသားကို ပြုတ်ပြီး ကင်သလိုမျိုး ကင်မှာမို့ အလူမီနီယံ အသားကင်တဲ့ Foil ဖြင့် သေချာလေး ထုတ်ပြီး … ပူနေအောင် ကြိုတင်ဖွင့်ထားသော oven ထဲသို့ ထည့်ပါ။
Preheat oven 350ºF –2hours
ကင်ပြီး အမဲသားကင်ကို ပါးပါးလှီးပါ။
ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ကို ညက်နေအောင် ထောင်းထားပါ။
1/4 cup လတ်ဆတ်သော သံပုရာရည်
နံနံပင် ရိုးတံများကို ပါးပါးလှီးထားပါ။
နံနံပင် အရွက်တို့ဖြင့် နှံစပ်အောင် နှယ်ပီး သုပ်စားရင် အမဲသားကင် ချို၊ ချဉ်၊ ငံ၊ စပ် အရသာကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အကယ်လို့ အမဲသားကင်ကို အသားကင် သပ်သပ် .. အသားကင် နှင့် ချဉ်၊ ငံ၊ စပ် အရသာ ဆော့စ် တမျိုးဖြင့် တို့စားချင်တယ်ဆိုရင် …
1 tsp rice vinegar ( or ) Lime Juice
1/8 cup fish sauce, adjust to taste
By Thet Nandar • Posted in Beef - Salad, Beef Recipe, Spicy	• Tagged baked beef, beef salad, coriander root, cup lime juice, dinner, food, ginger garlic, light brown sugar